Carmen Mola: usoro ato ya. Choputa na Spanish Elena Ferrante | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Carmen Mola: usoro ato ya
Encarni Arcoya | | Emelitere na 28/02/2021 12:00 | Akwụkwọ
Nụtụla banyere Carmen Mola na usoro atọ ya? Know maara onye onye edemede a bụ? Ọ bụ ezie na o nwere akwụkwọ ole na ole na ahịa, akwụkwọ akụkọ mbụ ya gara nke ọma, mana onye bụ onye edemede ahụ?
Ọ bụrụ na ịchọrọ mara ihe banyere Carmen Mola, usoro atọ ya na ụfọdụ ịmata ihe nke pen ya, akwụsịla ịgụ ihe anyị ga-agwa gị gbasara ya.
1 Ọnye na-bụ Carmen Mola?
1.1 N'okwu Carmen Mola
2 Pen nke Carmen Mola
3 Carmen Mola: usoro ato ya
3.1 Nwanyị gypsy
3.2 Netgbụ na-acha odo odo
3.3 Nwa ọhụrụ
Ọnye na-bụ Carmen Mola?
Ihe mbụ ị kwesịrị ịma gbasara Carmen Mola bụ nke ahụ aha ahụ abụghị ezigbo, mana ọ bụ aha nzuzo. Onye ode akwukwo n’onwe ya achoro, n’uzo a, idebe ndu ya na onwe ya n’ebe ndi okacha amara, nke mere na mmadu ole na ole mara onye dere ya. Ọbụghị naanị nke ahụ, mana ọ naghị enye ọtụtụ mkparịta ụka onwe onye iji gbalịa ime ka njirimara ya bụrụ. Agbanyeghị, ihe ịga nke ọma nke akwụkwọ mbụ ya, nke abụọ ndị ọzọ so na akụkụ nke atọ ahụ, emeela ka ọtụtụ mmadụ na-achọ ya.
Site na ihe amara banyere ode akwukwo, A mụrụ Carmen Mola na Madrid. A maara na ọ bụ onye hụrụ ọrụ na ezinụlọ ya n'anya. Ma debekwa aha gị karịa, nke bụ ya mere o jiri chọọ pseudonym iji bipụta ọrụ ya.
La Akwụkwọ mbụ o bipụtara mere na 2018 ọ bụkwa ya bụ akwụkwọ mbụ nke trilogy. N'afọ sochirinụ ọ wepụtara akụkụ nke abụọ ebe, na 2020, wepụtara nkeji nke atọ. Dị ka data ahịa si kwuo, Carmen Mola rere ihe karịrị 250 puku, sụgharịrị gaa n'asụsụ 11.
Na mgbakwunye, yana nnukwu mmeta nye onye edemede ahụ, bụ eziokwu ahụ bụ na Diagonal TV na Viacom International Studios achọpụtala trilogy ahụ ma bịanye aka na nkwekọrịta iji gbanwee ya na nnukwu ihuenyo.
O di nwute, enweghi ihe omuma banyere onye edemede, amaghi ya ma o bu nwanyi, ma obu nwoke. Anaghị ahazi mgbasa ozi ma ọ bụ nkwado nke ọrụ ya, mana ihe niile na-agagharị na netwọkụ mmekọrịta yana n'egosighi onye ode akwụkwọ bụ (itinye ya ihu na ya).
N'okwu Carmen Mola
N'ajụjụ ọnụ nke Maria Fasce na Zenda onye edemede ahụ n'onwe ya - ma ọ bụ onye edemede - zara ajụjụ ahụ.
-Kedu ihe kpatara ị ga-eji zoo n'azụ aha nzuzo?
-N'ezie, enwere ọtụtụ ihe na anaghị m aghọta ihe kpatara ndị ọzọ edeghị ya. Iji malite, echere m na ihe dị mkpa bụ akwụkwọ ọgụgụ, ọ bụghị onye dere ya. Kedu ihe dị iche ọ na-eme ma ọ bụrụ na ọ bụ nwanyị toro ogologo, maa mma ma ọ bụ mkpụmkpụ, jọrọ njọ? Mmasị m bụ ka ndị mmadụ gụọ akụkọ gbasara ndị enyi nwanyị gypsy abụọ na onye uwe ojii na-abụ abụ hụrụ n'anya nke Mina Mazzini bụ onye na-enyocha ọnwụ ha. Mana m kwuru na e nwere ihe ndị ọzọ. Ọ bụ akwụkwọ mbụ m pụtara na nke ahụ pụtara na m na-arara onwe m nye aka na ọrụ m.
Achọghị m ka ndị ọrụ ibe m, ndị enyi m, nwunye nwanne m ma ọ bụ nne m mara na ọ bụ m dee ihe banyere onye na-egbu nwa agbọghọ site na igwupu olulu n'isi okpokoro isi ya iji tinye ikpuru ikpuru ma nọdụ na-ele anya ha na-eri ụbụrụ They Ha agaghị aghọta, maka ha niile, m bụ otu ihe ... more nwere ọtụtụ. Gịnị ma ọ bụrụ na akwụkwọ akụkọ ahụ dara kpamkpam? Ọ ghaghị ịkọwa onwe ya na ihere ga-eme ya nke ukwuu. Na, na Kama nke ahụ, ọ bụrụ na ọ bụ ezigbo ihe ịga nke ọma? Ma eleghị anya, a manyere m ịgbanwe ndụ m, nke bụ ihe m na-echeghị, enwere m afọ ojuju na nke m ... Enwere m ike iche banyere ihe ndị ọzọ, ejiri m n'aka.
Pen nke Carmen Mola
Mgbe ị na-akwado Carmen Mola, otu n'ime nkwenye dị ukwuu bụ onye bụ «Spanish Elena Ferrante». N'ezie, ọ bụrụ na a tụlee akụkụ nke ọzọ na nke ọzọ, ọtụtụ na-eche na ha na-emegide ya. Ha dị nnọọ iche na ụzọ nke ịkọ akụkọ. Ugbu a, na usoro nke ụdị akwụkwọ mpụ, anyị nwere ike ịsị na ọ yiri.
Ma ọ bụ na Carmen Mola bụ dị nnọọ nta na akụkọ ya, nke mere na ihe omume ndị a na-akọ n'akụkọ ya dị oke njọ, jọgburu onwe ya ma jiri obi ọjọọ ka o wee mee ka ị ghara ịna-agụ ihe. Nye ya, ihe ọjọọ dị na akwụkwọ ya ma ọ na-eweta ya n'ụzọ kachasị obi ọjọọ na obi ọjọọ, na-enweghị akọ. Ihe ojoo.
Ọzọkwa, ọ na-egosi na enyochala ndị uwe ojii a ma ama ebe ọ bụ na ihe ọ maara banyere otu o si arụ ọrụ ziri ezi, yana mmepe nke nyocha, nke "aghụghọ" iji gbochie okwu ikpuchi ...
Akụkụ ọzọ na kwụpụta na pen nke Carmen Mola bụ ụzọ o si eme ka agwa "ọjọọ" mara anyị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ na-abata n'uche nke ndị na-emegide ya, ma ọ bụ ndị na-emegide ya, iji mee ka anyị chọpụta agwa gbagọrọ agbagọ, ajọ ihe ọjọọ, obi ọjọọ ... N'ezie, n'ime akwụkwọ atọ ahụ, ikekwe ọ bụ nke ikpeazụ ga-ahapụ gị mmetụta nke dịkarịrị njọ kacha njọ.
Anyị maara banyere Carmen Mola usoro atọ ya, ebe ọ bụ na ugbu a, ha bụ akwụkwọ ọ bipụtara ugbu a. Agbanyeghị, anyị maara na ọ bụghị naanị ya, ọkachasị na ihe ịga nke ọma atọ ahụ pụtara.
N’ihi ya, anyị chọrọ ịgwa gị banyere nke ọ bụla n’ime akwụkwọ ndị ahụ ka ị mara ntakịrị banyere ihe ha na-ekwu.
The gypsy nwunye (Nwunye ...
Nwunye Gypsy bụ akwụkwọ mbụ na trilogy. N'ime ya ị ga-ahụ a akụkọ dị nnọọ ka nke nke akwụkwọ mpụ. Ma ka ị na-aga, gị achọpụta na e nwere ihe ọzọ. Ma ọ bụ na kama igbu ọchụ, ị ​​ga-enwe abụọ n'ime ha, metụtara ibe ha ebe onye isi okwu ga-akọwa eziokwu.
Ihe di nma n’akwukwo a bu na ihe odide a n’eme ka onye na-agu ya soro n’ihe omimi ahu, n’ihi na o mere ka o buru onye n’choputa, jiri nwayo nwayo nachaa ezé ya ka o nwee ike mara otu o ga-esi kwusi.
Netgbụ na-acha odo odo
Net Purple (Nwunye ...
Mgbe Gypsy Bride, na 2019 bịara The Network Purple, akụkụ nke abụọ nke trilogy ebe anyị na-aga n'ihu na isi agwa anyị zutere na akwụkwọ mbụ. Agbanyeghị, ọ bụghị igosipụta anyị agwa na emechi emechi, ọ na-aga na-awụfu ntakịrị mmadụ nke na-ezo n'ime ya. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ọ na-eme ka ị malite ịmata ihe mere o ji dị otú a, ihe mere o ji akpa àgwà otú ahụ.
Maka nke a, ikpe ọ na - eweta bụ ihe na - agbawa obi: ọhụhụ nke nwa nwoke ahụ. Yabụ, ị gaghị enweta foto onwe gị na nke mmadụ nke onye nyocha, kamakwa nke nne nwere ike ime ihe ọ bụla ọ nwere ike ime iji chọta nwa ya nwoke, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ dabere na iwu na-akwadoghị ma tinye ndụ ya n'ihe egwu (na nke ndị ọzọ).
La Nena (The gypsy nwunye ...
E bipụtara akwụkwọ ikpeazụ na trilogy nke Carmen Mola na 2020 wee ruo ugbu a ọ bụ otu n'ime akwụkwọ kachasị mma o dere. Na mgbakwunye, enwere mgbanwe doro anya nke agwa nwanyị, Inspekta Elena Blanco.
Ọ bụ ezie na n'akwụkwọ nke abụọ o gosiri anyị ụdị mmadụ mmadụ ọzọ, na nke atọ a ọ gara n'ihu na-eme ka akụkụ ahụ ka mma. Nke ahụ bụ, ọchụchọ mee ka onye agwa gị nwee ọmịiko n’ebe onye na-agụ ya nọ. N'okwu a, ihe omimi ga-achọta enyi efu.
N’ezie, ị ga-ahụ akụkọ a na-akọkarị, nke a ga-ekwu, ma ọ bụ nke na-eyi egwu Ezigbo njedebe na-akwado akwụkwọ akụkọ mpụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Carmen Mola: usoro ato ya
6 mmelite ederede maka March
Akwụkwọ Boris Izaguirre